Ikhitshi lokuntywila kwiifinki zitsalela iNickel eBrush
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Tsala iiFaucets / WOWOW Ikhitshi lokuntywila kwiifinki Thoba iNickel eBrashi
I-WowOW Kitchen Sink Faucets Tsala ezantsi i-Nickel e-Bronze
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 40 amanqaku umthengi
(40 ncomo ngumthengi)
Ikhitshi elilodwa le-faucet ephezulu ye-arc inezi zinto zilandelayo: ukujikeleza nge-360-degree, ukucoceka okuguquguqukayo ngaphandle kwee-angles ezifileyo kuzo zonke iindlela;
Amanzi afaneleke ngakumbi, kwaye amanzi ashushu nabandayo anokutshintshwa ngokukhululekileyo;
Unokulawula iqondo lobushushu ngokuthanda. Ukuqhuma-ubungqina beentsimbi ezingenasici ezingenasici, kulula ukuzifaka, amaqondo obushushu aphezulu kunye nokumelana noxinzelelo, anti-ukuguga.
Imiyalelo yokufakwa kwe-2310700
I-Ktchen tap kunye nokukhupha ukuphuma kwe-2310700
Yeyiphi enye yezona zinto zibalulekileyo ekhitshini lakho? Uninzi luza kuphendula ekhitshini xa le nto isetyenziswa amaxesha ngamaxesha ngosuku. Ngaphandle koko, iimpompo zasekhitshini zihlala zithathwa njengeendawo eziphambili zekhitshi. Nokuba isitayile siphi ekhitshini. Ngesizathu esithile ingqalelo yomntu wonke ibanjwa ngokwemvelo ngumpompi wekhitshi. Isizathu esingakumbi sokukhetha itephu ekhitshini efanelekileyo iyilo lakho lasekhitshini elitsha. Olona khetho lulungileyo lunokuthatha yonke ibhalansi ngaphandle koyilo lwekhitshi lakho, okanye unokukhetha itephu yasekhitshini engahambelani nokukhetha kwakho oko ulindeleyo ngokwendlela yokusebenza. Okokugqibela, umgangatho ngokuqinisekileyo awuhlali ungabonakali. Umntu unokubona ngokulula ukuba yintoni itephu esemgangathweni yasekhitshini kwaye yeyiphi engeyiyo.
Kodwa ubona njani umgangatho? Kuya kufuneka usebenzise itephu yasekhitshini iminyaka ukuze ukwazi ukwahlulela ukuba umgangatho wempompo yasekhitshini ungaphezulu komndilili okanye akunjalo. Ungaqaphela ngokulula ngeli xesha iwaranti eyivelisa umvelisi we tap ekhitshini. Umthengisi onikezela ngewaranti yonyaka omnye unokulindela ezinye iingxaki emva kweminyaka embalwa. Ke ngoko akafuni kunikezela ixesha elide lewaranti ukuze wonge iindleko. Kwelinye icala, umthengisi we tap wasekhitshini obonelela a
Ixesha lewaranti yeminyaka emi-5, iyathemba imveliso yayo kwaye ngokuqinisekileyo ifuna ukuthatha uxanduva lwayo ekusebenzeni kwayo kuyo yonke loo minyaka. Abantu banokubuza, kutheni kungenjalo iwaranti yeminyaka eyi-10? Ewe, ukusebenza kwetephu yasekhitshini kuya kuxhomekeka ekusebenziseni kwayo, ekugcinweni kwayo nakumgangatho wamanzi. Iitephu zasekhitshini zinokuhlala ngokulula ngaphezulu kweminyaka eli-10, kodwa ukulondolozwa ngokulungileyo kunye nolawulo lwamanzi kukhetha ukuqinisekisa unyamezelo lobomi obude.
Cofa isitshizi ekhitshini lasekhitshini
Abantu abaninzi bakhetha ukuphuma kwitshiza lokutshiza ekhitshini ngaphezulu kwayo nayiphi na enye itephu yasekhitshini. Esona sizathu siphambili kukuba ungafika ngokwenene nakweyiphi na indawo ngaphakathi okanye ejikeleze ikhitshi lakho. Ngale ndlela, ukucoca ikhitshi lakho akunakwenzeka lula ngenye itephu yasekhitshini. Ngombhobho wamanzi unokukhulisa ngokulula ukufikelela kwakho nge-intshi ezingama-32 kwicala ngalinye. Ngempompo eqhelekileyo ekhitshini awusoze ufikelele kulo mgama, kungakuchaphazela kakhulu ukucoceka. Ngeli phuli lokukhupha ukuphuma ekhitshini uya kucoca ikhitshi lakho ngokonwaba kwamehlo.
Isibonelelo esikhulu sokudityaniswa kwempompo yokutshiza ekhitshini kukuba ibukeka intle kwaye akuqapheli ukuba ufikelela kumbhobho wamanzi ophantse ube yi-4'11 ”. Oku kukhupha itephu yokutshiza ekhitshini le-WOWOW kujongeka nje ngathi yitephu ekhitshwayo eqhelekileyo. Nokuba ujonge kufutshane, awuyi kubona umohluko ukusuka kwimpompo ekhitshini esemgangathweni. Kodwa xa utsala intloko yesitshizi yokukhupha impompo yasekhitshini, ngesiquphe uqaphela ukuba unayo ithumbu lamanzi elinophindwayo ezandleni zakho. Kwaye uya kumangaliswa bubude bayo! Emva kokusebenzisa umbhobho wamanzi, ibuyisa ngokuzenzekelayo kwisimo sayo sokuqala, ngokungakhange kwenzeke nantoni na. Le ndlela yokusebenza yokubuyisela amanzi egudileyo kunye ne-hose yayo yokuguquguquka kwamanzi kunye ne-counterweight yenzelwe ngokumangalisayo, uya kuqaphela kwangoko.
Ukugcina ikhitshi lekhitshini ngesitshizi sokukhupha
Ngubani othanda ukugcina isitofu ekhitshini? Akukho mntu sinokuthi. Ulungiso nangona kunjalo luvakala lubaluleke ngakumbi kunokuba lunjalo. Ngempompo yasekhitshini, olona ulondolozo lubaluleke kakhulu kuya kufuneka uyenze icoca kakuhle. Ngokuqinisekileyo umntu kufuneka asuse ubumdaka emva kokupheka kwimpompo yasekhitshini. Ngale ndlela ugcina ukujija kwetephu yasekhitshini kukwimo elungileyo. Njengale festile yakho yasekhitshini iyaqhubeka ikhanya ngokungathi yayisitsha. Ngaphandle koko, kubalulekile ukuba ususe yonke intsalela yamanzi anzima kwintloko yokutshiza yendawo yokutshiza. Ingakumbi xa uhlala kwindawo enamanzi ekunzima kunokuba iqhelekile. Oku ngokusisiseko kuthetha ukuba amanzi aqukethe chaki eninzi. Oku kushiya enye intsalela kwikhitshi lasekhitshini emva kokusetyenziswa ngakunye. Ayongongxaki kwaphela, lo gama ucoca rhoqo.
Ukuba awukwenzi oko, i-chaki iyakwakha rhoqo kwaye ekugqibeleni akuyi kuba lula ukuyikhupha kwakhona. Oku kunokuphembelela ukusebenza kwamavili, iingwevu kunye nokutshiza kwetephu yasekhitshini. Ngokukodwa xa uthe wakhupha impompo yokutshiza ekhitshini, unokufuna ukucoca ikhitshi lakho lasekhitshini ngokunzulu emva koko. Oku kuqinisekisa ukuba yonke intsalela isuswa ngokulula nangokufanelekileyo ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okude kobomi bakho bokukhupha itephu yasekhitshini.
Umsebenzi wakhupha itephu yokutshiza ekhitshini
Ngaphandle kokusebenza, oku kukhupha impompo yokutshiza ekhitshini kuyilelwe. Ubume be-arc obuphezulu bunika i-elegancy kunye nendawo ebonakalayo ngexesha elifanayo. Ukugqitywa kwe-nickel okugqityiweyo kunika oku kukhupha isipompo sekhitshi isitayela esimangalisayo ngokunjalo. Iya kulunga nakweyiphi na ivenkile yokutyela okanye ihotele, kodwa ekhitshini lakho ngokuqinisekileyo liya kukunika oko kuphakamisa ubukufuna.
Ngokuphathelene nokusebenza, oku kukhupha isipompo sekhitshi elineempawu ezintathu zomsebenzi wamanzi ukukunika intuthuzelo oyilindeleyo xa ucoca ikhitshi lakho. Unokuma kancinci umjelo wamanzi ngeqhosha elikhethekileyo kwintloko yokutshiza. Ngale ndlela awunyanzelekanga ukuba uchukumise i-lever xa ufuna ukubamba amanzi okwesibini. I-lever inokusebenza ngesandla esinye ukulungelelanisa ubushushu bamanzi kunye noxinzelelo lwamanzi. Ngomsebenzi wokujikeleza nge-degrees ezingama-360 kwimpompo yasekhitshini unokufikelela ngokwenene kuzo zonke iindawo.
Isiqinisekiso sokukhupha impompo ekhitshini lasekhitshini
Le tap ephezulu ekhitshini yokutshiza yenziwa ngezinto ezikumgangatho ophezulu wobhedu. Ke ngoko i-WOWOW inomdla wokukunikeza iminyaka eyi-5 iwaranti kunye nokubuya kwemali kwiintsuku ezingama-90. Ukuzithemba kwethu kuya kufuneka ngokuqinisekileyo ukweyiseke kuwe ngexabiso lemali sikunika yona ngale ndlela yokukhupha isipompo sekhitshi.
Izibonelelo zempompo yasekhitshini ngokukhupha isitshizi ngesingezantsi:
Ukufikelela kubanzi ngenxa yokukhupha isitshizi
 Uyilo oluhle kunye noluncinci
 Itekhnoloji yokuphinda uyisebenzise kwakhona
I-SKU: 2310700 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Tsala iiFaucets tags: Tsalela ngaphandel, Isandla esisodwa, spray
Ndothukile ngovuyo ngale mveliso. Ndiyakholelwa ukuba le yenziwe yiChina, kodwa bendiphakathi kweepompo zasekhitshini. Ndithathe indawo yompompo wegama elitsha ndaza ndalifaka endaweni yalo isiphatho kwisithuba seminyaka emi-2 ngenxa yokugqitywa kokugqitywa. Kungaphelanga nonyaka kamva, isiphatho sayiphinda. Endaweni yokuchitha amaxesha ama-4 isixa-mali njengoko bendisenzile kule faucet, bendicinga ukuba ndiza kuyithenga okwangoku. Ndifuna ixesha elingakumbi lophando, kodwa ndifuna itompu esebenzayo. Ukufika kwayo, ndothuswa ngumgangatho wokwakha, kuba wawungekho ngaphantsi komgangatho wokwakha kwigama lam lophawu olunye. Amalungu ayemgangatho oqhelekileyo, kodwa andicingi ukuba ukuthenga ezinye izinto kukukhetha. Oko bekusithiwa, ngeli xabiso, ndicinge ukuba le yinto enokuchithwa xa isaphuka. Ukuba ingandigqiba unyaka, ndingavuya. Ukuthi ga, kuhle. Isebenze ngokungenasiphako kwaye ufakelo lusemgangathweni oluqhelekileyo / lulula kuye nawuphi na umntu osebenzayo. Ukufakwa kundithathe malunga neyure, kodwa ixesha elininzi elichithwe kukucoca ngaphandle kwesinki kunye nokususa itompu endala. Ndinayo oku malunga neenyanga ezimbini kwaye ukutshiza kwamanzi kulungile kuyo yomibini imisebenzi. Ngenxa yokuba le iyintloko esuswayo, ndongeze ubunzima obongezelelekileyo kumbhobho ukuqinisekisa ukubekwa ngokufanelekileyo xa ndikubuyisela kwingalo yompompo. Ukuba luncedo, ubunzima bukhuselekile kakuhle, bungcono kunompompo wam wangaphambili owawugcina ukutyibilika. Oku kubalulekile kuba intloko yespayer ayinaso isitshizi esinemagnethi kunye nobunzima obuyikhuselayo. Ngokubanzi, ndonwabile ngomgangatho wokwakha, izinto zokuthambisa, kunye neempawu zeli nqanaba lamaxabiso. Eli lixabiso elikhulu. Ndingacebisa.
Ndisandula ukutshintsha indawo yam eyakhiweyo ephuculiweyo kaMoen faucet ($ 260) ngeWOWOW Kitchen Faucet Single Handle Kitchen Sink Faucets with Pull Down Sprayer in Brushed Nickel Commercial. Nangona i-Moen yayintsha (indlu entsha) yayisoyikeka ukuyisebenzisa.
Le faucet WOWOW intle, igudile kwaye kulula ukuyisebenzisa. I-WOWOW iyunithi eyenziwe ngcono ngakumbi kune-Moen kwaye ngexabiso elikhuphisana ngokwenene. Ukufakwa kukhuseleke ngakumbi kwaye akuphumi.
Emva kokuchitha iinyanga ezi-4 ndisokola ukufumana ubushushu kunye nokuhamba ngendlela endiyithandayo ngalo lonke ixesha ndisebenzisa isinki yekhitshi, ndincuma ngendlela ekulula ngayo ukuseta ubushushu bamanzi kunye nokuhamba ngokufanelekileyo ngesibambo esigudileyo nesichanekileyo.
Isitshizi sokutsala sisebenza ngathi sinomtsalane kwaye sibuyele kwintambo yeswan ngaphandle kokuyityhalela ekhaya,
ZIintlanu iinkwenkwezi BONKE ROUND
I-Wowow Faucet yafika ngokukhawuleza kwaye yafakwa ngokukhuselekileyo ukuze kungabikho nto ikhethiweyo okanye idibeneyo. Umbhobho mhle! Yala maxesha kwaye yomelele. Umgangatho obalaseleyo kunye nexabiso elikhulu. Ukufakwa kwakulula kwaye itepu enemingxunya emi-3 ilunge ngokugqibeleleyo ngaphezulu kwesinki yethu yakudala. Le faucet isinika uxinzelelo lwamanzi olunamandla kakhulu. Ndiyayithanda nje! Ndiza kuthenga iipompo ezongezelelweyo zezindlu zethu zokuhlambela kwaye ndiza kujonga kule nkampani kuqala njengoko zibonelela ngenkonzo ebalaseleyo kubathengi.
Indala yethu ibincinci kakhulu kwaye ingaphazamisi. Le faucet yekhitshi iyayibulala. Ndifumanise ukuba le faucet ibitshiphu kuninzi lwezinye iimveliso ezaziwayo. Umbhobho wokuqubha uza nayo yonke ipakethe kunye nemiyalelo .Ufakelo lwalulula kwaye kufuneka uyenze ngomonde kakhulu. Intloko yesitshizi ibanjwe endaweni ngobunzima obufakwe phantsi kwesinki. Uxinzelelo lwamanzi luzinzile kwaye alugudisi. Kulula ukulawula. Iphakamileyo. Leyo yinxalenye esiyithandayo. Kulunge kakhulu ukuhlamba yonke into.
Ndineminyaka engama-64 ubudala kwaye ndenziwe utyando lwentamo emi-2 ngoko ke ukuba phantsi kwekhabinethi kwakungumsebenzi onzima kum kodwa njengolwandle lwangaphambili andizange ndinikezele! Beka kangangoko kunokwenzeka kunye ngaphambi kokufaka! Nantso indlela smart!
Thatha enye uyikhuphe emva koko uqalise ukucoca umphezulu wendawo esinki uye emsebenzini!
UKUBA awulunganga ukuba ulunge, uphathe ngesandla, ngenxa yokuba uswele imiyalelo elungileyo, ndicebisa ukuba iPlummer ngenye indlela ungayenza.
Yimpompo entle nebabazekayo! Umfazi wam uyayithanda njengam. Enye itepu yekhitshi yahlala kuphela iminyaka emi-6! Ndiyathemba ukuba le ihlala ixesha elide, ixesha elide njengoko isakheke ngcono!
Oku kutsala umpompo wekhitshi kwenza isinki yethu yebar esezantsi ibonakale yanamhlanje. Umbhobho kulula ukuyifaka. Ndiyayithanda iijikelezo zayo ezingama-360 endinokuzitsala ukuhlamba ikona nganye yesinki. Kwakhona, ukusebenza kwesiphatho esinye kwenza ubomi bam bube lula. Ndiyakwazi ukulungelelanisa ubushushu bamanzi ngokufanelekileyo. Ngexabiso endihlawule ngalo, le faucet ilungile.
Le faucet ifakelwe malunga nenyanga endlwini yam ngoku kwaye ibe lolona hlaziyo lubalaseleyo kwikhitshi lethu. Ukufakwa bekungekho lula njengoko bekufanele ukuba kusenjalo kuba iithumbu eziqhotyoshelweyo zazimfutshane kakhulu- kuye kwafuneka ndifumane iihoses ezongezelelekileyo kunye nezifakelo ukufikelela kwimibhobho yamanzi
Ifayetethi ikumgangatho olungileyo, inzima, inzima, ikomityi ngaphakathi (ubuncinci endiyibonayo), ithumbu elide nelithambileyo. Siza kubona ukuba iza kuhlala ixesha elingakanani. Ndiza kubuya ndihlaziye izimvo zam ukuba kukho nawuphi na umcimbi.
Ndifumanise ukuba bayilayishe ividiyo yofakelo kutshanje, ecace gca. KUFUNEKA uyibukele ngaphambi kofakelo.
Icebo lam: Awudingi ukufaka isiphatho ecaleni. Ngokwenyani ndikhetha kwaye ndiyifakile ngesiphatho ngaphambili, akukho ngxaki okwangoku. Ndicele umntu ukuba andincedise ukufaka. Ukufakelwa kulula kakhulu. Kodwa ingxaki yam kukuba andinazo izixhobo zokwehlisa itompu yantlandlolo, erusiweyo kakubi.
Ndichukumisekile yile faucet yam intsha! Ndazi kuphela ukuba ziyi- $ 130 engaphantsi kwegama elaziwayo lamagama ngenxa yoko kuye kwafuneka ndizame. Ufakelo lwalulula kwaye akukho mfuneko yakubiza ingcali.itompu isebenza kakuhle kakhulu. Ngama- $ 70 akukho nto ingako yokukhalaza ngayo.
Ndihlawule njenge- $ 80? Ndizibonile iifompo ezifanayo ze- $ 120 nangaphezulu. Ndichithe kunye neyure ndikhupha endala, kodwa oku kungenile kwimizuzu eyi-10 okanye njalo. Imiyalelo ibingacacanga, kodwa ndithathe indawo yabambalwa kwaye andiyidingi. Ukuhanjiswa okukhawulezayo, ubunzima obuhle, kubonakala kumnandi!
Ndayisebenzisa ukubuyisela itephu yam yasekhitshini. Ukufakwa kwakulula. Isiphatho esinye sinokuwacima amanzi nakweyiphi na indawo nokuba kushushu okanye kuyabanda njengoko kuchasene nompompo omdala, owenziwe yiDelta, apho amanzi acinywe ngesiphatho kuphela kwindawo yecanter. Unokukhetha ukutshiza okanye ngqo kunye neqhosha lokuphumla. Ungasusa ispout naphina esinkini ukwenza kube lula ukucoca.
Ukucinga ukuba le yimveliso ebalulekileyo. Yenziwe nge-nickel ebrashiweyo, into efana nentsimbi engenasici. Inye into endiyithandayo malunga nompompo kukuba kukho ithumbu elandisiweyo onokurhuqa ngalo ngenxa yokusetyenziswa okuninzi. Umqheba ukhululekile. Izinto ezilungileyo ezisetyenzisiweyo kwimibhobho.
Ngaba oku sele kufakelwe iinyanga ezimbalwa ngoku kwaye kuyasebenza ngokumangalisayo. Bafaka kwakulula kakhulu. Unobunzima bokususa endala. Le yafakwa ngemizuzu kwaye ibisebenza kakhulu ukusukela ngoko.
Ndichukumisekile yile faucet yam intsha! Ufakelo lwalulula kwaye akukho mfuneko yakubiza ingcali. Ndiyayithanda yonke into malunga nayo, ukutsala isitshizi, ukuphakama, uxinzelelo lwam lwamanzi lonyuke kakhulu! Andikwazi ukuyiguqula ngokupheleleyo xa ndifumana ukupheka kuba bendinokwenza ubumdaka obukhulu! Kwakhona, banewaranti eyandisiweyo ebonisa kuphela ukuzithemba kwabo kwimveliso yabo.
Ukufakwa ngokulula, kunye nemiyalelo engenamsebenzi; usenokungathumeli miyalelo kwaphela. Ngale nto ithethwayo itephu entle ngexabiso elihle kakhulu.
Le faucet yekhitshi kulula ukuyisebenzisa. Umgangatho ulunge kakhulu, kulula ukulawula ukuhamba kwamanzi Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ndiyayithanda kakhulu.
Ndisebenzise i-plumber ukufakela okoko bendinazo izixhobo ezizodwa zokukhupha itephu endala. Ndiyayithanda intsebenzo egudileyo kunye nomgangatho wale faucet.
Itepu itekhnoloji ephezulu kwaye isebenza kakuhle, ukukwazi ukwandisa iintambo kuyenza ibaluleke ngakumbi kwaye iluncedo ekucoceni. Izinto ezenziwe zenziwe ngomgangatho weprimiyamu kwaye andifumani nasiphi na isiphako kule faucet. Ndiyilovin!
Yithande le faucet. Ndiphinda ndenza ikhitshi lam kwaye itepu entsha ibiphezulu kuluhlu. Le faucet ingqineke iyile nto bendiyifuna.
Itheyipu yam yangoku yayijongeka indala kwaye iphelelwe lixesha, kodwa andifuni ukuchitha itoni ukuyitshintsha. Iimpompo kunye nokulungiswa kunye nexabiso, kodwa oku bekuxabiseke kakhulu kwaye kujongeka KAKHULU kunokhetho oluninzi olunamaxabiso aphezulu. Ukufaka kundithathe ixesha elincinci, kodwa xa iyonke, ndonwabile kakhulu ngale mveliso.
Kwafuneka ndiyolule imigca yam kodwa kwindlu endala. Imveliso ibingcono emva koko ndacinga. Kungcono ke le ndiyithengele enye isinki kwivenkile yehardware.
Imiyalelo inokuba icacile ngakumbi kodwa ezinye iividiyo ze-youtube zanceda. Khange ndibenamava angaphambili kwaye ndikwazile ukufumana iliso elimnyama ngesihlwitha kodwa kujongeka kulungile. Usebenzise iinyanga ezimbalwa kwaye akukho ngxaki.
Ndonwabe kakhulu yile faucet! Ilula kakhulu kwaye ithe ngqo ukufaka. Isebenza kakuhle kwaye akukho nto iziva iphantsi. Ijongeka intle kwaye isebenza ngokumangalisayo! Ndincoma kakhulu!
Kuhle kakhulu kwaye kulula ukuyifaka, intle njengombala, iyahambelana netayile yam ekhitshini lam.
Kulula kakhulu ukuyifaka ndiyayithanda ukuba ine-3/8 'imibhobho ukuze kungabikho mfuneko yokuba nexhala malunga nokuvimba ikalika okanye i-calcium njengoko uninzi lwezixhobo ezitsha zokugcina amanzi zisenza.
ndinompompi omdala wasekhitshini, kwaye ndiyitshintsha nje, ndiyayithanda le faucet, kulula ukuyifaka ungayenza ngokwakho kwaye unexabiso elihle.
Umnqa omkhulu! Ndiyayithanda uyilo, jonga kwaye uzive usetyenziselwa itepu. Ukwakhiwa kwesitshizi kulungile !! Ndiye ndabona ukuba uxinzelelo lwamanzi lubhetele kakhulu kunompompo wam wangaphambili owawumangalisiwe.
Ukufakwa kwakulula. Ndingacebisa le faucet kuye nakubani na ocinga ukuyithenga.
Ndifumene itephu yamanzi iintsuku ezimbalwa. Umyeni wam uyifakile izolo. Ufakelo olulula kakhulu, sisivumelwano esihle, siyifakile le faucet kwisitya sethu sasekhitshini. Asivuzi okanye silenga phantsi. Siyayithanda le nto.
Impompo emangalisayo yemali !! Akukho ngxaki zokufakwa kuthi. Isebenza kakuhle kwaye iluncedo kakhulu.
Imiyalelo emincinci yokuqinisekisa ngenkqubo yokufaka nangona onke amalungu enxibeleleke kakuhle kwaye yonke imisebenzi ibalasele.
Ndithenge le faucet malunga neenyanga ezintandathu ezidlulileyo kwaye ndonelisekile yindlela esebenza ngayo kwaye ijongeka intle kakhulu
Ndiye ndajonga kwakhona ngaphambi kokuyithenga. Umgca oshushu umfutshane kunale ndinayo ngoku. Akukho ngxaki, sifumene ulwandiso kwa-Ace. Ilula ngokutshintsha. Ijongeka ilungile, ukuhamba kuyomelele. Ndingacebisa le faucet.
Imveliso emnandi iyonke ngexabiso. Umbhobho utsala ngokulula. Sasinofakelo lwemibhobho yamanzi ngenxa yokuba imibhobho yethu yemibhobho yamanzi yayikufutshane kakhulu nodonga lwekhabhinethi.
Sasingaqinisekanga ekuqaleni njengoko sasingazange sive ngale nto kodwa sagqiba kwelokuba sizame ngokujonga konke ukuphononongwa okuhle. Siyavuya super nale faucet. Umgangatho ulungile, ujongeka umkhulu, uhamba kakuhle, ixabiso elikhulu kunye nokupakishwa okukhulu. Sinayo malunga nenyanga ngoku kwaye ngekhe sonwabe.
Ndifuna ukubuyisela itompu yam yakudala ekhitshini kwaye ndicinga ukuba lolukhetho olufanelekileyo. Iza neepleyiti ezinemingxunya emi-3 endala yam. Kukho ividiyo kwiphepha le-wowow lokuyalela indlela yokufaka. Kuthatha kuphela imizuzu eli-15 ukugqibezela ukufakela. Ukuhamba kwamanzi kugudile kwaye kunamandla.
Ndikhethe kakhulu, ndenza uphando oluninzi kwaye ndihlala ndisiya kwiimpawu zamagama kwaye ndingaze ndiye ezantsi emgceni, kungoko ndenze uphando olunzulu ngaphambi kokuba ndongeze igama lam elingaziwayo kum kuluhlu lwam olufutshane lweempawu ezaziwayo uyilo olufanayo ngaphezulu kokuphindwe kabini okanye kathathu ngexabiso. Ezinye izinto ezimbini ezixhalabisayo: 1. Ukuphononongwa okumbalwa kukhankanyiwe ukurhuqa akuzange kubuyise umva kwaye kubuyele endaweni endaweni efanelekileyo, kushiyeke kujinga. Ngokwenyani umba wofakelo. Kukho ubunzima ekufuneka buhlengahlengisiwe, obulula ngokulula, emva koko busebenza ngokugqibeleleyo. 2. Umbala-iifoto zibonise ukuba zifana nombala ongwevu webrashi ongenasici, kodwa wenziwe nge-nickel ebrashi, enokuba nombala ofudumeleyo, omdaka ebendikhathazekile awungangqinelani nezixhobo zam ze-SS. Andifumananga uphononongo lukhankanya loo nto okanye imibuzo, ndiye ndabuza lo mbuzo ngokwam kwaye ndafumana iimpendulo ezinkulu zindiqinisekisa ukuba azinawo umbala omdaka kwaye ziya kusebenza kakuhle ngezixhobo zentsimbi ezingenasici. Elo libe yingcebiso elungileyo, enkosi kwabo bantu bathathe ixesha ukuphendula umbuzo wam, andizange ndiphoxeke. Le yimveliso esemgangathweni esemgangathweni, uyilo olutsaliweyo kunye nenqaku lokutshiza luyamangalisa, iisinki zam azikaze zicoceke kangako! Ekuphela kwento andinakuthetha ngayo kukuphila ixesha elide kuba kuphela inyanga, kodwa njengoko uninzi lweefompu zasekhitshini lusetyenziswa rhoqo, kwaye andinasizathu sokucinga ukuba ayizukuhlala ngokufanayo neempawu ezibiza kakhulu. Ukhetho olukhulu, yiya ngalo, gcina i $, ndonwabile ukucebisa ngeenkwenkwezi ezi-5.
Emva koqwalaselo lwam lwantlandlolo, inkonzo yabathengi yaqhagamshelana nam ukuba incedise ekubuyiseleni itephu engalunganga nangona idlulile kwi-WOWOW imbuyekezo yefestile. Ngoncedo lwabo ndikwazile ukulungisa itepu kodwa okwangoku bavakalisa ukuthunyelwa kwakhona endaweni yoko ukuba khange ndikwazi ukulungisa eyokuqala. Ingxaki yayikukuba indlela yokuphatha yangaphakathi yavumela isiphatho ukuba sihambe siye kwelinye icala ukuze silungelelanise iqondo lobushushu kodwa singanyuki sihle ukuvula ukuhamba kwamanzi. Kwakudingeka ukuba ihlukaniswe kwaye ihlaliswe kwakhona ukuze isebenze ngokupheleleyo. Ngoku itepu isebenza njengoko kulindelwe kwaye inkangeleko yeyona nto bendiyifuna. Iinkwenkwezi ezi-5 zenkonzo yabathengi yale nkampani!
Yoqobo: Le faucet intle kwaye ixabiso belilungile, ngelishwa alisebenzi. Akuphumi manzi. Isibambo sihamba siye ngapha nangapha sitshintshe phakathi kobushushu / ukubanda kodwa asihambi sinyuka sisihla ukuvula itompu. Ndizibonile ezinye izimvo kunye nemibuzo malunga nokungabikho kwamanzi ndicinga ukuba inokuba ngumcimbi wendibano kwezinye izinto. Lonke unxibelelwano lwaluxhomekeke ngokuchanekileyo kwaye iipavini zomgca wokubonelela zavulwa. Njengobungqina obongezelelekileyo bokuba amanzi ayekhona kwaye ayafumaneka ndaqaphela ukuba amanzi aphuma ngaphandle kwethumbu emva kokuba ndicimile itepu. Oko ndiyithengile kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukulungiselela igumbi lokuhlamba impahla eligqityiweyo ndidanile kakhulu kukuba andinakukwazi ukusebenzisa le faucet intle kwaye ngoku iwindow ebuyayo iphelile ngoko kujongeka ngathi ndinamathele kuyo.
Kuthe nje kwasweleka itephu yethu yasekhitshini saza sayala le faucet ukuba ithathe indawo yayo, sonwabile kuba sizakuyifumana ngokukhawuleza kwaye sikwazi ukuyifaka kule mpelaveki ukuze sikwazi ukuqhubeka sisebenzisa isinki yethu yasekhitshini. Nangona kunjalo, xa sivula ibhokisi, saqaphela kwangoko ukukrola okukhulu ekugqibeleni kwinqanaba elide lempompo. Ngokuqinisekileyo lo ngumba we-QC nanjengoko ekuqaleni kwakuza kurusa, ungasathethi ke ngoku ngathi kubi kakhulu. Sikhathazeke kakhulu kuba ngoku asinakusebenzisa isitya sethu sasekhitshini de sifumane enye. Le yingxaki enkulu. Andikholelwa ukuba into enje ayibanjwanga ngethuba lokutshekishwa komgangatho ngaphambi kokuba imveliso ipakishwe kwaye ithunyelwe! Kukhathazeke kakhulu njengoko besijonge phambili ekufakeleni le faucet yekhitshi kwaye isinki yethu iphinde isebenze kwakhona!
QAPHELA: Ukuhlaziya uphononongo lwethu ukusuka kwi-1 ukuya kwi-5 yeenkwenkwezi ngenxa yenkonzo ebalaseleyo yabathengi esiyifumene emva kokuthumela uphononongo lwethu lokuqala. I-WOWOW mhlawumbi iyeyona nkonzo yabathengi ibalaseleyo esakha sayifumana kuyo nayiphi na inkampani. Basithumele itepu engenasiphako nge-DHL yekhuriya evela e-China eyafika ngeentsuku ezimbalwa kunye neplate encinci, nayo evela e-China nge-DHL. Nje ukuba sifake itepu siyithande ngokwenene, ijongeka intle kwaye isebenza kakuhle. Kwakhona, i-WOWOW yaya ngaphezulu nangaphaya ukwenza le meko ilungele thina kwaye sasichukumiseka kakhulu yinkonzo yabo yabathengi.
Qiniseka kwaye ungeze iteyiphu yetywina yeTeflon kunxibelelwano olushushu / olubandayo; ayifakwanga kupakisho. Imiyalelo ibhalwe kuhlobo lwento ebonakala ngathi yi-Outer Mongolian eguqulelwe esiNgesini enokubangela ukudodobala kobuchopho nakowuphi na utitshala wesikolo wegrama, okt. “Ukugqitywa kofakelo kunye nokuvavanya ukuvuza okanye hayi.” Ngombulelo imizekeliso ilungile kakhulu eyenza ukuba iinxalenye zomlomo zingafuneki… kodwa ziyahlekisa.
Ndichukumisekile yile faucet yam intsha! Ndandidinga kakhulu kwaye ndingazi nto malunga neepompo, kuphela iigama ezinamagama. Kuphando lwam ndafumana i-WOWOW kwaye lonke uphononongo lwalukhethekile. Ndazi kuphela ukuba ziyi- $ 100 engaphantsi kwegama elaziwayo lamagama ngenxa yoko kuye kwafuneka ndizame. Ufakelo lwalulula kwaye akukho mfuneko yakubiza ingcali. Ndiyayithanda yonke into malunga nayo, ukutsala isitshizi, ukuphakama, KUNYE noxinzelelo lwam lwamanzi lonyuke ngokucacileyo! Andikwazi ukuyiguqula ngokupheleleyo xa ndifumana ukupheka kuba bendinokwenza ubumdaka obukhulu! Makhe ndikuxelele xa iDepho yaseKhaya ithengisa kakhulu kwiintsuku ezi-4 emva kokuba ndifakile itephu yam entsha andizange ndikhe ndihendwe ukuba ndijonge. Kwakhona, banewaranti eyandisiweyo ebonisa kuphela ukuzithemba kwabo kwimveliso yabo.